LXQT: Kedu ihe ọ bụ na kedu ka esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19? | Site na Linux
NXT bụ ìhè ọzọ na ọsọsọ Ebe obibi Desktọpụ, nwanne LXDE. Dika nke ikpeazu, enweghi otutu ihe omuma banyere ya na weebụ ma e jiri ya tunyere ndi ozo ama ama. Ọmụmaatụ, anyị ikpeazụ post ezipụta banyere NXT, ọ bụ ihe karịrị 5 afọ gara aga, na nọmba mbipute 0.9.0.
Ọzọkwa, dị ka ọ dị Lxde, enwere ole na ole Nkesa GNU / Linux nke gunyere ya dika Ndabere Desktọpụ Environment. Ya mere, n'ime akwụkwọ a, anyị ga-elekwasị anya karịsịa Kedu ihe ọ bụ? y Kedu ka esi etinye?. N'ezie, mesie ike ihe dị ugbu a DEBIAN GNU / Linux metadistribution, na nke kachasị ọhụrụ mbipute, na nọmba 10, aha koodu Buster. Nke bụkwa ugbu a ihe ndabere maka Mwepụ MX-Linux 19 (ujo ojoo).
"LXQt bụ ebe desktọọpụ Qt dị fechaa. Ọ gaghị adabara gị. Ọ gaghị ada ma ọ bụ jiri nwayọọ gị usoro. Ọ na-elekwasị anya na ịbụ tebụl kpochapụwo nwere ọdịdị nke oge a. E tinyelarị LXQt na ọtụtụ nkesa Linux na BSD, yabụ ịnwere ike ịnwale ya na sistemụ gị nkịtị ma ọ bụ na VM. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara nwụnye na LXQt Wiki na GitHub. Na akụkọ ihe mere eme, LXQt bụ ngwaahịa nke njikọta n'etiti LXDE-Qt, ụtọ mbụ nke LXDE's Qt, na Razor-Qt, ọrụ ngo nke na-ezube imepụta ebe nchekwa Desktọpụ Qt nwere ebumnuche dịka LXQt dị ugbu a. LXQt kwesiri ịbụ onye nọchiri LXDE otu ụbọchị, mana dịka nke 09/2016 ebe desktọọpụ ga-anọgide na-ebikọ ọnụ ugbu a. " "Banyere" ngalaba nke LXDE ukara website
1 Ihe niile gbasara LXQT
Ihe niile gbasara LXQT
Lxde wepụtara otu n'afọ 2013 nke onye sayensị sayensị nke Taiwan Hong Jen Yee Mgbe emechara PCManFM-Qt, mbụ desktọọpụ modul QT. N'ime oge, desktọpụ dum nke NXT, na ebumnuche ime ka a ihe ohuru, nke ohuru na nke ohuru na obere ume na akụ na-ewe nkesa, na-agbahapụ kpam kpam mmepe nke Lxde.
NXT a na-eme ya tumadi na QT5 na ihe ndị ọzọ dị na Ihe osise XDEX. Ma ugbu a, ọ na-agafe 0.14.1 mbipute (anụ). Firstdị nke mbụ ya na nke zuru ezu bụ 0.7.0, wepụtara na May 7, 2014, dị ka ngwaahịa mbụ nke mmakọ nke ọrụ ahụ Aguba-Qt y Lxde.
NXT dị site na ụlọ ọrụ gọọmentị n'ọtụtụ GNU / Linux Distros, dika: DEBIAN, Ubuntu na Fedora. Fọdụ na-ebute ya na ndabara mgbe ha lekwasịrị anya na ndị otu na-eri obere akụ.
El usoro okike nwa afọ na- NXT O nwere otutu mmemme, ihe ndia bu ihe ama ama ma obu amara: PCManFM-Qt (Njikwa faili), Akwukwo akwukwo-Qt (Editọ ederede), LXImage-Qt (Ihe onyonyo onyonyo), na otutu ndi ozo.
Na-enye fechaa, agbakwunyere desktọọpụ gburugburu ebe obibi, bara uru na kọmputa nwere oke CPU na RAM ma ọ bụ arụmọrụ dị ala. Na mgbakwunye, ọ dị mfe iji ọtụtụ, ekele a anya-adọrọ adọrọ interface mana iji omenaala.
A na-echekwa ya site na a mba mmepe obodo, ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ Lxde.
Ihe mejupụtara ya na-ejigide ya LXDE isi ya modular, nke ahụ bụ, enwere ike iji ha onwe ha LXQT Desktọpụ Environment.
O nweghi njikwa window nke ya, ma a na-ejikarị ya eme ihe Openbox. Ọ bụ ezie na mwekota ya na XFWM y Muffin.
Ọ nwere a Omuma interface n'agbanyeghị na o nwere ike ịdabere na QT5 na KDE Okpokoro 5.
Ọ nọ na mmepe zuru oke ma erubeghị nke gị nke mbụ tozuru okè (1.0) ma obodo ya na-eto eto oge niile dịka ntọala ya nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye.
Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke LXQT Project
Ebe ị nwere ike ịnweta ndị ọrụ bara uru, dị ka a Blọgụ, Wiki na Nzukọ, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Njikọ ndị a dịkwa iji gbakwunye ozi na Lxde:
Họrọ LXQT Desktọpụ Environment na ihe ọ bụla ọzọ na ịba uru ma ọ bụ set nke nchịkọta ndị ọzọ.
Cheta na: I nwekwara ike wụnye a Desktọpụ Environment dabere na LXQT mfe site dochie ngwugwu lxqt site lxqt-core.
Reboot na nbanye site na ịhọrọ Ebe obibi Desktọpụ NXT, ma ọ bụrụ na inwe ihe karịrị otu Ebe obibi Desktọpụ arụnyere na ọ bụghị na-ahọpụta ndị Nbanye Manager lxqt-session.
Chetakwa, nke a bụ nke ikpeazụ na isii post nke usoro banyere Gburugburu GNU / Linux. Ndị gara aga dị ihe dị ka GNOME, KDE Plasma, XFCE, pawuda, MGBE y Lxde. E nwere ọtụtụ ndị ọzọ Gburugburu Ebe Obibi O yikarịrị ka anyị ga-enyocha n'ọdịnihu ndị ọzọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Entorno de Escritorio» amara aha «LXQT», nwanne nke «LXDE», ma ihe di iche na ya, edere ya na Teknụzụ «QT», kama «GTK+2»Ọ nwere kpochapụwo oche na a oge a na anya na dị nnọọ obere eji / mara n'ime ụwa nke «Distribuciones GNU/Linux», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » LXQT: Kedu ihe ọ bụ na kedu ka esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?
Oge ikpeazụ m nwara LXQt na Debian 10 ọ nwere ụfọdụ ngwa Xfce yana onye na-ede Xfwm na onye njikwa windo. O yighị m ka ejikọtara ọnụ. Apper anaghị etinye ihe oyiyi ahụ na mmelite mmelite na-efu.
N'aka nke ọzọ, otu distro na Plasma na-erepịa otu ihe ahụ ma ọ bụ obere. LXQt enweghị uche.
Ekele, Autopilot. Ruo ugbu a mụ na LXQT nọrọ karịa ụbọchị 15, ahụbeghị m nsogbu ọ bụla ma ọ bụ nwayọ. Ma ọ mara ezigbo mma ma rụọ ọrụ. Gbalịa ọzọ ka ị hụ ihe ị na-eche ugbu a.
Kedu ụdị nke arụnyere na debian?
0.14.1 ma ọ bụ 0.12
Cheers! Argemiro. Jiri 0.14.1. Daalụ maka okwu gị.
Iji iwu Tasksel site na Ihe Njirimara Onye Ọrụ (GUI)
Gbaa Console ma ọ bụ Terminal site na gburugburu Desktop
Gbaa iwu iwu ọzọ:
apt wụnye taskel
taskel wụnye lxqt-desktop –wụnye ọhụrụ
Gaa n'ihu ruo na njedebe na Usoro Nduzi Tasksel (Nhọrọ Nhọrọ).
Iji iwu Tasksel site na Interline Line Interface (CLI)
Gbaa Console ma ọ bụ Terminal site na iji igodo Ctrl + F1 wee bido nnọkọ mgbọrọgwụ nke onye ọrụ.
Họrọ gburugburu LXQT Desktop na ngwa ọ bụla ọzọ ma ọ bụ setịpụrụ ngwugwu ndị ọzọ.
Gaa n'ihu ruo na njedebe na usoro ntụzịaka Tasksel (Nhọrọ Nhọrọ).
Ọ na -atụgharị gburugburu ọ bụghị ya?
OpenWifi, oru mmeghe iji mejuputa Wi-Fi dabere na FPGA na SDR